उद्योग व्यापार क्षेत्रमा प्रयोग गरिने चिह्न | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण उद्योग व्यापार क्षेत्रमा प्रयोग गरिने चिह्न
उद्योग व्यापार क्षेत्रमा प्रयोग गरिने चिह्न
चिह्नको प्रयोग मानव सभ्यता जत्तिकै प्राचीन अभ्यास हो । त्यसमा पनि पूर्वीय हिन्दू दर्शनमा विभिन्न चिह्नको व्यावहारिक प्रयोग र उपासना अत्यधिक पाइन्छ । जस्तो हिन्दू समाजमा कुनै पनि शुभकार्यमा स्वस्तिक चिह्नको प्रयोग हुने गरेको छ । अक्षर ब्रह्मको रूपमा ओमकार चिह्नको उपासना गर्ने गरेको पाइन्छ । यस चिह्नको निष्ठापूर्ण उपासनाबाट तत्त्वज्ञान र ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध गरी मोक्षसमेत प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । दैनिक व्यवहारमा पनि विभिन्न प्रयोजनका लागि विभिन्न चिह्नहरूको प्रयोग भएका धेरै उदाहरण पाइन्छन् । जस्तो हनुमानजीले लङ्काको अशोक वाटिकामा सीताजीलाई आफू रामचन्द्रको दूत भएको प्रमाण चिह्नका लागि सीताजीको अगाडि औंठी खसालिदिएका थिए । त्यस्तै लङ्का जाने पुल निर्माण गर्दा रामचन्द्रजीले समुद्रमा फालेको ढुङ्गा डुब्ने तर हनुमानले फालेको ढुङ्गा तैरने रहस्य के हो भनी रामले हनुमानसँग सोधनी गर्दा हनुमानले प्रत्येक ढुङ्गालाई ‘राम’ शब्द (चिह्न)ले अभिमन्त्रित गरेर समुद्रमा फालेको रहस्योद्घाटन गरेका थिए । यसबाट व्यक्तिभन्दा बढी राम ‘चिह्न’ शक्तिशाली हुँदो रहेछ भनी पुष्ट्याइँँ गर्ने पौराणिक उदाहरण प्रशस्त छन् ।
आधुनिक सञ्चार प्रणालीको विकास हुनुपहिले पूर्वीय मुलुकमा मात्र होइन, पाश्चात्य मुलुकमा समेत एउटा डाँडाबाट अर्कोमा हुँदै टाढाटाढा समाचार सम्प्रेषण गर्ने माध्यम टर्चलाइटका प्रकाश चिह्न हुन्थे । राज्यमा सिपाहीहरूले सुरक्षाको दृष्टिले शब्दभन्दा साङ्केतिक चिह्न प्रयोग गर्दथे । यसरी प्राचीन कालमा चिह्नको सहायताले शान्ति, सुरक्षा र जनोपयोगी कार्यहरू गरिन्थे । यस्तै अभ्यासको विकसित प्रणालीका रूपमा वर्तमान समयमा उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका चिह्न र उपाधिहरू प्रयोग गरी अत्यधिक मात्रामा आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको पाइन्छ ।
उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा चिह्नले खेलेको भूमिका एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक होला । बजारमा औद्योगिक तथा व्यापारिक वस्तुको विश्वास वृद्धि गरी कसरी मूल्य सृजनामा योगदान पुर्यारउँछ भन्ने कुरा अनुभव गर्न बोतल बन्दी गरेको पानीको एउटा सानो दृष्टान्त विचार गरौं । मानौं तपाईंले बसमा केही लामो दूरीको यात्रा शुरू गर्नुभएको छ र तपाईंलाई प्यास लागिरहेको छ । एउटा बस बिसौनीमा दुई जना युवा पानी लिनुहोस् भन्दै आए । दुवै जनासँग उही ब्राण्डको पानी छ । एक जनाले यो जारको पानी हो भन्दै लेबुल नभएको साधा बोतलमा भरेर लिएको छ र आठ रुपैयाँमा किन्नुस् भन्छ । अर्कोको उस्तै बोतल खानेपानी लेबुल(चिह्न) लगाएको पनि छ र सील गरेको पनि छ । ऊ २५ रुपैयाँमा किन्नुस् भन्छ । तपाईंले कुन बोटल किन्नुहुन्छ ? निश्चय नै आठ रुपैयाँ होइन, २५ रुपैयाँ खर्च गर्न तयार हुनुहुन्छ । दुवै बोतलको अन्तराल मूल्य रू. १७ केको मूल्य हो ? दुवै बोतलको पानी त उही नै हो । त्यो १७ रुपैयाँ निश्चय नै व्यापार चिह्नका कारणले हो । याद गरौं, वर्तमान बजार प्रणालीमा मूल्य वस्तुको भन्दा धेरै बढी व्यापार चिह्नको हुन्छ, रामभन्दा रामको नाम ठूलो भएजस्तै ।
प्रस्तुत लेखको प्रमुख उद्देश्य उद्योग व्यापार क्षेत्रमा प्रयोग गरिने मुख्यमुख्य प्रकारका चि≈न र उपाधिसँग सुपरिचित गराउनु हो । चिह्न भन्नाले उद्योग व्यापार तथा सेवा कार्यमा कुनै निश्चित विषयको पहिचानका लागि प्रयोग गरिने जुनसुकै चिह्नलाई जनाउन सक्छ । उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा प्रयोग गरिने चिह्नका प्रमुख स्वरूपका बारेमा यहाँ चर्चा गरिन्छ ।
व्यापारचिह्न : व्यापारिक चिह्न भन्नाले कुनै व्यावसायिक व्यक्ति वा सङ्गठनले उत्पादन वा विक्रीवितरण गर्ने वस्तुलाई अरूको भन्दा बेग्लै रूपमा पहिचान गराउन स्पष्ट देखिने गरी प्रयोग गरिने सङ्केत हो । यस्ता सङ्केतमा व्यक्तिगत नाम, शब्द, अक्षर, अङ्क, चित्र, ठोस आकृति, रङहरू, लोगो वा यिनीहरूको कुनै संयोजन हुन सक्छ । जस्तो ‘टोक्ला चिया ।
सेवाचिह्न : सेवा चिह्न पनि व्यापार चिह्न जस्तै हो । व्यापार चिह्न भन्नाले वस्तुमा प्रयोग हुने चिह्न हो भने सेवा चिह्न भन्नाले सेवा कार्यमा प्रयोग हुने चिह्न हो । जस्तै नेपाल दूरसञ्चारले सञ्चार सेवाका प्रयोेग गर्ने शङ्ख चिह्न । बौद्धिक सम्पत्ति विधामा चिह्नको कुरा गर्दा समूहचिह्न, सुपरिचित चिह्न र प्रमाण चिह्नलाई पनि बिर्सनु हुँदैन ।
समूहचिह्न : समूह चिह्न भन्नाले कानूनसम्मत ढङ्गले स्थापना भएको कुनै छाता सङ्गठन वा सहकारी संस्थाको स्वामित्वमा रहेको र त्यसैको रेखदेख र नियन्त्रणमा रहेको तर छाता सङ्गठन आफैले प्रयोग नगरी कुनै समान उद्देश्यको व्यवसाय आबद्ध भएका सदस्यले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने चिह्नलाई भनिन्छ । यो साना किसान तथा लघु उद्यम प्रवर्द्धन गर्न उपयोगी हुन्छ । जस्तो पश्मिना व्यवसायीहरूले प्रयोग गर्ने ‘च्याङ्ग्रा पश्मिना’ र लघु उद्यमीहरूले प्रयोग गर्ने ‘सौगात’ चिह्न ।
सुपरिचित चिह्न : सुपरिचित चिह्न भन्नाले कुनै भौगोलिक क्षेत्रका सम्बन्धित वस्तु वा सेवाका उपभोक्ता समूहको जानकारीमा रहेका, संरक्षणका लागि दर्ता अनिवार्य नभएका र राष्ट्रको आधिकारिक निकायले सुपरिचित उपाधि दिएका चिह्न हुन् । त्यस्ता उपाधि दिने आधिकारिक निकाय अदालत वा बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय हुन सक्छन् । नेपालको बजारमा सुपरिचित चिह्नको हैसियत राख्न सक्ने खालका धेरै व्यापार चिह्न तथा सेवा चिह्नहरू छन् र धेरैले दाबी पनि गरेका छन् तापनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा अदालत वा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट मान्यता पाउन सकेका छैनन् ।
प्रमाण चिह्न : यो उत्पादित वस्तु वा सेवाको कुनै विशेष गुण प्रमाणित गर्न प्रयोग गरिने नाम वा चिह्न हो । यो कुनै औद्योगिक प्रतिष्ठानले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवाको खास गुणस्तर वा विशेषता सम्बन्धमा आधिकारिक सरकारी निकाय वा संस्थाबाट सो बेहोरा प्रमाणित भएमा मात्र प्रदान गर्ने चिह्न हो । नेपाल गुणस्तर चिह्न, भारत गुणस्तर चिह्न, आईएसओ गुणस्तर चि≈न, रगमार्क, फेयर ट्रेड आदि सबै प्रमाण चिह्नका उदाहरण हुन् । यसबाट उपभोक्ताले आफ्नो छनोटअनुसारको स्तरीय वस्तु प्राप्त गर्छन् ।
भौगोलिक सङ्केत : कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा त्यहाँको जलवायु, स्थानीय शीप र माटोका कारणले त्यहाँ उत्पादित कुनै वस्तुमा खास गुण वा विशेषता वा ख्याति विद्यमान रहन्छ भने त्यस्तो भौगोलिक नाम र सोसँगै प्रयोग हुने चिह्न भौगोलिक सङ्केत हुन्छ । यसमा तीन ‘ज’ जमीन वा जलवायु वा जनता (स्थानीय समुदाय)को भिन्नताका कारणले कुनै खास वस्तुमा देखिने भिन्न गुणलाई पहिचान गराउन दिइने भौगोलिक नाम भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा भौगोलिक जातीय तथा सांस्कृतिक र जैविक विविधता छ । भौगोलिक विविधताको कारण खासखास ठाउँमा खासखास वस्तुले ख्याति आर्जन गरेका छन् । जस्तो मुडेको आलु, जुम्लाको स्याउ, फर्पिङको नासपाती, जुम्लाको मार्से धान आदि । तिनमा गुण र स्वाद अन्तको भन्दा फरक छ । निश्चित शीपयुक्त जातीय तथा सांस्कृतिक विविधताले गर्दा खोकनाको तेल, भक्तपुरको दही, सल्यानी खुकुरीजस्ता वस्तुले आआफ्नै महत्त्व राख्दछन् । त्यस्ता वस्तुलाई संरक्षण गर्नसके स्थानीय समुदायले कृषि जडीबुटी र हस्तकलामा आधारित सामान उत्पादनबाट बढी फाइदा पाउन सक्छन् । तर, नेपालमा यसको कानूनी संरक्षण हुन सकेको छैन । व्यापारिक सर्कलमा तराईबाट आएका माछालाई त्रिशूलीका भनेजस्तै गरेर उपभोक्ता ठग्ने काम भएको छ । आफ्नो भूगोलले दिएको वरदान हामीले सही वस्तु उपभोग गर्न र हिमालयको बोतल बन्दी पानी, कृषि तथा जडीबुटीमा आधारित राम्रा निर्यातयोग्य चिजहरू अन्तरराष्ट्रिय बजार पाउन सकेका छैनौं ।
व्यावसायिक नाम : व्यावसायिक नाम भनेको कुनै एउटा व्यावसायिक फर्म, कम्पनी वा संस्था वा सङ्गठनलाई अरूभन्दा फरक पहिचान दिन प्रयोग गरिने कारोबारको नाम हो । यसलाई व्यापारिक नाम पनि भन्न सकिन्छ । यस्ता नाम खासगरी कम्पनी ऐन, फर्म रजिष्ट्रेसनसम्बन्धी ऐन, सङ्घसंस्थासम्बन्धी ऐन र सहकारी ऐनअनुसार दर्ता गरिने भए पनि सोही कार्यालयबाहेक अन्यत्र नदोहरिएला भन्न सकिन्न । कुनै उद्योग व्यवसाय सरकारी निकायमा दर्ता गर्नेबित्तिकै व्यापार चिह्न वा सेवा चिह्नजस्तै त्यसको संरक्षण हुन्छ भन्ने सम्झनु भूल हुन्छ । व्यवसायको नाम भनेको आफूले खडा गरेको संस्थाको नाम हो । एउटा कम्पनीका व्यापार चिह्न वा सेवा चिह्नहरू धेरै हुन सक्छन् । तर, व्यावसायिक नाम भने एउटा मात्र हुन्छ । व्यावसायिक नामलाई ट्रेडमार्क कानूनअनुसार व्यापार चिह्न वा सेवा चिह्नका रूपमा पनि दर्ता र प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तो ‘डावर’ व्यवसायको नाम पनि हो, व्यापार चिह्न पनि हो र सेवा चिह्न पनि हो । एउटै चिह्नले प्रसङ्गअनुसार विभिन्न चिह्नको हैसियत प्राप्त गर्न सक्छ ।
कुनै पनि चिह्नले वस्तु वा सेवा चिनाउने, कुन स्रोतबाट प्राप्त भएको हो भन्ने कुरा आस्वस्त पार्ने, उचित वस्तु वा सेवा छनोटमा तथा व्यापार विस्तारमा मद्दत गर्न, व्यापार प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने र कालान्तरमा कम्पनीको ख्याति बढाउने र आफै पनि बहुमूल्य सम्पत्तिका रूपमा रूपान्तरित हुने गर्छ । जस्तो ‘कोकाकोला’, ‘फेसबूक’ र ‘सामसुङ’जस्ता व्यापार चिह्नको मूल्य अर्बौं छ । ट्रिप्सको मान्यताअनुसार कुनै पनि चिह्नलाई संरक्षणका शर्त पूरा भएसम्म सदाका लागि संरक्षण पाउँछन् ।
नवप्रवर्तन र सृजनशील कार्यमा महिला
१२ बैशाख २०७५, बुधबार ०५:३४
प्रमुख मालवस्तुको सीमापार व्यापार
१२ बैशाख २०७५, बुधबार ०५:३२